प्रचण्ड र देउवाले मार्सल लगाउने भएपछि के गर्छन् ओली ? – shubhabihani
Home / रास्ट्रिय खबर / प्रचण्ड र देउवाले मार्सल लगाउने भएपछि के गर्छन् ओली ?
प्रचण्ड र देउवाले मार्सल लगाउने भएपछि के गर्छन् ओली ?
Posted by: admin in रास्ट्रिय खबर December 31, 2016	Comments 876 Views
संविधान संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन खोजिएको एक महिना बितिसक्दा पनि के हुने भन्ने प्रष्ट नभइरहँदा शुक्रबार र शनिबारपछि भने अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । सभामुखले जसरी पनि अघि बढाउने, सत्तारुढ दल र मधेस केन्द्रित दलहरुको छलफल पनि सकारात्मक बन्दै गएपछि संविधान संसोधन प्रस्ताव र निर्वाचनसम्बन्धी विधयेक अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले आफ्नै संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलका क्रममा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरुलाई संसोधन अघि बढ्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्दै निर्वाचनको लागि तयार हुन आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसले ढुक्कता दिलाउँदा मधेसी मोर्चाका नेताहरु दुवै प्रस्ताव र विधयेक टेबल गर्ने र निर्वाचनमा जानसमेत तयार देखिएका थिए ।
संसदमा टेबल भएपछि प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने, पास गर्नेसम्मको बाटो खुल्ने आशामा उनीहरु छन् । एमालेको अवरोध भए पनि संसोधन अगाडि बढाउने भएपछि मोर्चा पनि उत्साही हुन पुगेको छ ।
प्रस्ताव अघि बढाउँनको लागि फेरि पनि एमालेले अवरोध गरिरहे मार्सल लगाउने सम्मको रणनीतिमा प्रचण्ड र देउवा पुगेको बताइन्छ । यस्तोमा आधा दर्जनभन्दा बढीपटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले भने प्रस्ताव नै असंवैधानिक रहेको बताउँदै आएको छ ।
९ दलको विरोध रहेको भन्दै सत्तारुढ दलले भने जसरी अगाडि बढाउन नसक्ने एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसोधन प्रस्ताव जनताको भावना विपरीत भएको भन्दै प्रस्तावको विषयमा आफूहरुले सोच्न पनि नसक्ने बताइरहेका छन् । संसदमा मार्सल लगाएर भए पनि प्रस्ताव अघि बढाउने भयो भने के गर्छन् भन्ने अबको केही दिनमा नै थाहा हुनेछ । आगामी सोमबार सत्तारुढ दलले प्रस्तावलाई संसदमा टेबल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
देउवाले उत्साहित हुँदै ढुक्क हुन आग्रह गर्दै मोर्चाका नेताहरुलाई प्रस्ताव पारित हुने विश्वास दिलाएका थिए । एमाले ढिलोचाँडो संसोधनमा घिसारिएर आउँने भन्दै देउवाले मोर्चाका नेतालाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका थिए । ओली पर्लक्कै पल्टिने स्वभावका नेता भएको भन्दै देउवाले विरोध गरे पनि उनी पग्लिएर आउने भन्दै प्रस्ताव पारित हुने आश्वासन दिएका थिए ।
देउवाले निर्वाचनको विरोध गर्ने दलहरु पछाडि पर्ने भन्दै मोर्चाका नेताहरुलाई निर्वाचनमा सहमति जुटाउन आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन नभए देशमा संवैधानिक संकट आउने र देशले प्राप्त गरेका महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धी नै धरापमा पर्ने भन्दै देउवाले २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रचण्ड औधी खुशी
यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग शनिबार बिहान छलफल गरेपछि आफू निक्कै उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । शुक्रबार मधेसी मोर्चासँगको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले संसोधन प्रस्ताव अघि बढाउन तयार भएपछि आफू उत्साहित भएको बताएका हुन् ।
‘कांग्रेससँग डर थियो । देउवा प्रस्ताव अघि बढाउन सक्रिय भएपछि औधी खुशी भएको छु’ मोर्चासँगको छलफलमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘म अब उत्साही भएँ यो खुशी कसरी बाँडौं । संविधान संसोधन प्रस्ताव अब पारित हुन्छ ।’
कसरी अघि बढ्छ हामी पनि हेर्छौ : गोकर्ण विष्ट, सचिव नेकपा एमाले
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको विषयमा प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । तर, आयोगको रिपोर्ट नलिएर अल्झ्याउँने काम सत्तारुढ दलहरुले गरेका छन् । निर्वाचनको कुरा गर्ने तर, निर्वाचन धकेल्ने काम सत्तारुढ दलहरुले गरेका छन् । अर्कोतिर संविधान संसोधन असंवैधानिक छ भनिहेका बेला जबर्जस्त अगाडि बढाउन खोज्नु नै असंवैधानिक छ ।
संविधानको धारा २७४ ले प्रदेशको सीमा हेरफेरको लागि प्रदेश सभा अनिवार्य हुुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सीमाका विषयमा सम्बन्धित प्रदेशले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण सीमा हेरफेरका लागि संघीय संसद अनिवार्य चाहिन्छ । सोहीकारण संघीय सीमाकंनका विषयमा रुपान्तरिक संसदले फैसला दिन सक्दैन ।
सत्तारुढ दलहरुले संविधानलाई लत्याएका छन्, कुल्चेका छन् । हाम्रो माग भनेकै लोकतन्त्रमा संविधान कानुन, नियमावली र विधिको आधारमा चल्नुपर्छ भन्ने हो ।
सरकारको यो प्रस्ताव असंवैधानिक छ अगाडि बढाउन मिल्दैन भनेर एमालेसहितका ९ प्रतिपक्षी दलहरुले भनिरहेका बेला कसरी अगाडि बढाइदो रहेछ हामी पनि हेर्छौ ।
हामीले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । सरकारले जसरी सहजै अगाडि बढाउने भनेर चर्चा गरिरहेको छ अवस्था त्यस्तो छैन । सहज रुपमा अगाडि बढ्ने अवस्था नै छैन ।
Previous: नेपालमा हल्ला फैलिएको रातो नम्बरको वास्तविकता
Next: आज को राशिफल बि .सं. २०७३ साल पुस १७ गते। आइतबार। इश्वी सन् २०१७ जनवरी १ तारिख। नेपाल संवत् ११३७ पोहेलाथ्व। पौष शुक्लपक्ष। तिथि– तृतीया, १४:३५ बजेउप्रान्त चतुर्थी।